EzikaJZ zichitha uDube-Ncube kwesikaSihlalo | Scrolla Izindaba
EzikaJZ zichitha uDube-Ncube kwesikaSihlalo
Uhlangothi lwe-ANC olwaziwa nge-Radical Economic Transformation (RET) oluphusha umkhankaso wokuketula uMengameli uCyril Ramaphosa seliphumele obala lathi ngeke lisameseka uNomusa Dube-Ncube ogaqele ukuba uSihlalo kaKhongolose eKZN.
Amasosha e-RET abebheke ukuvotela uNomsa Dube-Ncube onguNgqongqoshe wezeziMali e-KZN ukuthi abe nguSihlalo we-ANC esifundazweni engqungqutheleni yangoNtulikazi, kodwa manje asecula elinye iculo.
Bebefuna uDube-Ncube aphikisane nesiphakamiso sikaRamaphosa sokuthatha ihlandla lesibili ngesikhathi sengqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC ngoZibandlela.
Iqembu le-RET eleseka uMnu uJacob Zuma lithi alisamethembi uDube-Ncube njengoba angakaze aphumele obala ngokuthi uyameseka yini owayenguMengameli.
Omunye wabaholi be-ANC ongathandanga kudalulwe igama lakhe utshele i-Scrolla.Africa ukuthi bangase babe nenkinga ngokweseka umuntu okuzothi ngokuhamba kwesikhathi aseke uRamaphosa.
“Asisamethembi ngoba akaze aphumele obala ukuthi unathi ngoba njalo uma ekhuluma akabonakali njengomuntu ohambisana nathi. Ingakho sikholwa ukuthi iMeya yeTheku, uMxolisi Kaunda odume ngokuma kwakhe emphakathini eziveza ngokuba ilungu le-RET kumele simeseke ukuze aqokwe njengoSihlalo olandelayo wesifundazwe,” ngokusho komthombo.
Omunye umthombo we-ANCWL uthe abacabangi ukuthi uDube-Ncube uzwelana nezinkumbi zabantu.
“Uzenza umuntu omhlophe ngisho ekhuluma uyabona ukuthi umele iqembu lamakhukhunathi elikholelwa kuMengameli uRamaphosa,” kusho umthombo.
“Siyi-KZN siyabadinga abafana noZandile Gumede noma uMnuz Mxolisi Kaunda ukuthi bahole i-ANC siphinde sivuse nokwesekwa esagcina ukukubona ngesikhathi sobuholi bukaMengameli uZuma osekunyamalele embuthweni wethu.”
Amagama kaDube-Ncube noSihle Zikalala iwona abehamba phambili ekuqokweni kwamagatsha e-ANC esikhundleni sokuba nguSihlalo.
Ithimba likaDube-Ncube lisebenza kanzima ukuthengisa umbono wakhe wokuthuthukisa amadolobha asemakhaya ukuze abe isizinda somnotho wendawo.
UWiseman Ngobese ohola umkhankaso kaDube-Ncube we-Economic Game Changer udalule ukuthi ngokwemibono ayitholile emagatsheni ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi kuzoba phambili ohlwini lwakhe olubalulekile.